कस्तो अचम्म ! पादेर नै दिनको ३० लाख कमाउँछिन् यी महिला - Onlinekhabarhub.com
कस्तो अचम्म ! पादेर नै दिनको ३० लाख कमाउँछिन् यी महिला
आइतबार ५ मंसीर २०७८ १३:५२:५२ बजे
काठमाडौं । मानव जीवन विभिन्न चक्र पार गरेर मात्र बनेको हुन्छ । मानव जीवनलाई चलाउने क्रममा शरीरबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आउनु उत्पन्न हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो । पाद आउनु, डकार आउनु, प्राकृतिक र सामान्य कुरा हो । तर यसलाई कतिपय असहजर लज्जाको विषय मान्दछन् । तर अमेरिकी एक महिलाभने आफ्नो पादको कारण विश्वमा चर्चित मात्र छैनन्, लाखौं कमाउँदै छन् । यो घटना सुनेर अचम्म त पक्कै लाग्ला ।
एक अन्तर्वार्तामा लशले उनीसँग सम्पर्कमा रहेका एक व्यक्तिले उनलाई पादेर एक भिडियो बनाउन सुझाव दिएका थिए । शुरुमा उनी क्यामेरा अघि पाद्न तयार थिइनन् तथापी उनले एक भिडियो बनाइन् । उनको भिडियोलाई सुझाव दिने व्यक्तिले सकारात्मक माने । बिस्तारै उनलाई पादेर भिडियो बनाउने माग आउन थाल्यो । यसकालागि उनलाई पैसाको समेत अफर गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार ५ मंसीर २०७८ १३:५२:५२ बजे